Uchwepheshe we-Semalt: Indlela Yokushintshela Ku-Domain Elisha Ngaphandle Kokulahlekelwa Kusezingeni
Ungase uzimisele ukushintsha isizinda uma ubona ukuthi kukhonaokunye okusebenziseka komsebenzisi kuyatholakala. Noma, mhlawumbe, usanda kushintsha igama lenkampani futhi udinga ukushintsha igama lesizinda ibe yiokufanayo. Ngenhlanhla, kungenzeka ukudlulisela isayithi egameni lesizinda esisha ngaphandle kokulimaza usesho lokusesha.
uRyan Johnson, ochwepheshe be i-Semalt Amasevisi weDivaysi abelana ngamalengiso wokuthi ungashintsha kanjani igama lesizinda ngaphandle kokulimaza isimo sakho.
1 - buy backlinks for website. Emuva phezulu Konke
Ukushintshela kwisizinda esisha ngezinye izikhathi kungabangela izinkinga ezinkulu,futhi omunye angaphoqeleka ukuba abuyele kumdala. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi usebenza amafayela okusekelayo. Kunoma yikuphi, bazokwenzayenza uqiniseke ukuthi akukho ukulahleka okuzoba okubalulekile kuwe.
2. Hlanza I-Domain Yakho Entsha
Ukuhlola igama lakho lesizinda elisha kuqinisekisa ukuthi lesi sizinda esisha ngekeiqukethe noma yiziphi izinkinga ezingaxazululwa. Amathuluzi weWebhu ye-Google anikela ngezizinda ezintsha. Ikhasi Lezinyathelo Zezincwadi likuvumela ukuba uhlole amaphutha. Umakunoma yiziphi izenzo zomsebenzi ezidingekayo, wenze izinguquko ezidingekayo bese uthumela isicelo sokubukeza kabusha. Ekuvumelweni, umuntu angaqhubekangesinyathelo esilandelayo.
3. Ukuhambisa okuqukethwe
Ochwepheshe be-SEO batusa ukudlulisela okuqukethwe kusizinda esishaigama ngezingxenye zokulinganisa umthelela oyoba nawo ku-rankings yokusesha. Isikhathi esiningi, kodwa sivikela iwebhusayithi kusukaibeka ingosi yokucinga yayo engozini. I-301 iqondisa kabusha i-reroutes Google endaweni yendawo entsha. Ukuthunyelwa kombhalo kudinga ukubekauhlelo lokuphathwa kokuqukethwe endaweni.
4..Phinde uqondise kabusha Amakhasi Omdala
Ukusetha ukulungiswa kwe-301 yefayela le-.htaccess ukuqinisekisa ukuthiIzivakashi ze-Google nezingosi bazothola isizinda esisha. Izogcina izigcawu zokusesha futhi zivikele abanikazi kusuka ezihlakalweni zomculo eziphindwe kabili.Ukuze ugweme lokhu kudala amakhasi angu-404 okuqukethwe okungenakho okulingana nesizinda esisha. Futhi, hlela ama-URL amadala kuma-new ngaphambi kokuqhubanoma yikuphi ukuqondisa ukukhulisa ukuhambisana kokuqukethwe.
5. Yazisa i-Google ye-Move
Ukubuyisela ukwazisa izinjini mayelana nokushintsha kwesizinda. Kubuye futhiumqondo omuhle ukuhambisa isaziso soshintsho olusemthethweni. Kudinga ukungeza nokuqinisekisa isizinda esisha kumathuluzi we-Google Webmaster. Enyekufanele uqinisekise ukuthi wonke ama-301 asekhona ngaphambi kokuthi i-Google yamukele isicelo sokushintsha ikheli.
6. Dala i-Sitemap
Izindawo ze-HTML zithuthukisa isipiliyoni somsebenzisi, kanti iziphakamiso ze-XML sicelaizinjini. U-Google uncoma ukusebenzisa kokubili ama-URL amadala futhi abuyekeziwe. Iningi lamakhasi axhunyiwe ayingxenye yama-URL amadala. Ngakho-ke,amabhizinisi kumele anikeze isikhathi sesayithi ngaphambi kokufaka ama-shifting kuma-URL amasha. Ukudalulwa kwe-Manual XML kunzima, kodwa i-XML-Sitemaps kanyeAma-sitemaps we-Google-XML asiza ukulungisa uhlelo.
7. Hlola futhi ubuyekeze izixhumanisi zangaphakathi nezifakiwe
I-301 iphinda iqondise iphuzu langaphakathi lezixhumanisi ezibhekene nesizinda esisha. Ngaphakathiizixhumanisi ziholela endaweni lapho isizinda esidala sivala khona okusho ukuthi badinga ukufaka indawo ngaphambi kokuthi kwenzeke. Futhi, amasayithi axhumanisa ku-Isizinda esidala kufanele sivuselele izixhumanisi zabo ezisha, ngakho-ke kuqinisekiswe ukuxhumana okungenamkhawulo.
8. Ukuhlola i-Analytics
Okukhulunywe ngenhla kwezinyathelo eziyisikhombisa kuqinisekisa ukuthi isizinda asikwenziukulahlekelwa unomphela umzila wakhe wokusesha. Noma kunjalo, ukuqapha i-analytics yesayithi ne-Google Webmaster console kuyisibopho ezinyangeniokulandelayo.
9. Iziphakamiso ezengeziwe
Yazisa ababhalisile, abalandeli, kanye nezivakashi ze-imeyili mayelana noshintsho kusengaphambili
Yenza ikhasi nekhasi esikhundleni sokuqondisa kabusha indawo
Nikeza isikhathi sesizinda ukuvuselela amazinga ayo okuhamba phambili
Yenza umkhankaso wakho we-PR ukukwazisa izilaleli ezibanzi